Madaxweyne Ismail Omer Guelleh waa hoggaamiye noocee... | POHSOMEV.COM
Madaxweyne Ismail Omer Guelleh waa hoggaamiye noocee...
Madaxweyne Ismail Omer Guelleh waa hoggaamiye noocee ah, kaalintee ayuuse kaga jiraa siyaasadda geeska iyo ta adduunkaba?
Waxa Daabacay staff-reporter on Mar 21st, 2018 and filed under Daily Somali News, Editorial. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.
Mudane Guelleh waa madaxweynihii ugu horreeyey ee ay shacabka Djabouti doortaan. Illaa immigana waxa uu ku guuleystey saddex doorasho-madaxweyne oo dalkiisa ka dhacday sannaddadii 2005, 2011 iyo 2016kii. Doorashooyinkaa oo ku qabsoomay si nabad ah.
Muddooyinkaa saddexda goor ah ee uu ku guuleystay doorashooyinka madaxweyne iyo shantii sano ee ka horreyseyba waxa uu soo dhisay dawlad tayo leh, oo wasiirrada uu soo xushaa ay aqoon sare leeyihiin. Weliba wasiirrada intooda badani ay ku hadlaan luqado saddex ah amma afar ah. Qaabka ay u shaqeeyaanna uu yahay mid heerkoodu sarreeyo.
Awdalpress - London - Madaxweyne Ismail Omer Guelleh immga waa 71 jir, waxana uu hoggaanka dalka Djabouti qabtay sannaddii 1999kii, si nabad ahna waxa uu kursigii madaxweynenimo ugala wareegay AUN Hassan Guled Abdidoon oo dalkaasi madaxweyne ka soo ahaa illaa iyo wakhtigii uu xorriyadda ka qaatay France. Oo ku taariikhaysan 27/07/1977.
Dalka Djabouti waa dal yar oo juqraafigiisu sheego in uu yahay dhul kulul, buuralay u badan, webiyo iyo dhul biyood aan lahayn, laakiin dhul xeebeed ah. Wax soo saar beereed oo macno lehna ma laha, khayraad macdaneed iyo wax la mid ahna aan weli la shaacin, balse loo malaynayo in uu leeyahay Gas, Dhuxul dhagax iyo macdano kale. Dhaqaalihiisuna waxa uu ku dhisan yahay ganacsiga xeebaha iyo dekedaha dalkaasi uu leeyahay. Tiro ahaan dadka ku noole waa hal milyan iyo badh sida la sheego in uu ka badan yahayna waa dhici kartaa. Dadkaasi oo dhammaantoodba wada diiwaan gashan.
Muddadii Madaxweyne Ismail uu Djabouti hoggaaminayey waxa dalkaasi ka hana qaaday ganacsi weyn oo kor u qaaday dhaqaalaha iyo nolosha dadka, sidoo kale waxa aad loo horumariyey adeegyada bulshada sida, caafimaadka, biyaha, korontada, waxbarashada, dekedaha, waddooyinka iyo maamulka. Kaabayaasha dhaqaalaha oo ay dekedu ugu horreyso ayuu culayska saaray, waxana tobankii sano ee ugu danbeeyey laga sameeyey dalkaasi dekedo ay soo degeen dawladaha France, Maraykanka, China iyo shirkado caalami ah. Taasina waxa ay suurta gelisay in maalin walba la dejiyo amma la raro kumaan kun container oo bucsharado ah. Intaasi waxa dheer in uu dalalkaasi Djabouti laga siiyey saldhigyo millatari oo kala shaqeeya amniga mandiqadda. Waxana dalkaasi ku sugan ciidammo aad u badan oo wata maraakiib, diyaarado iyo saanado dagaal.
Dhinaca xidhiidhka caalamka waxa uu wada shaqayn fiican la leeyahay waddammada France, USA, China, India, Britain, waddammada muslimiinta iyo waddamada kale ee reer Yurub. Intii uu Mudane Guelleh madaxweynaha ka ahaa dalkaasi Djabouti na waxa dalkiisa soo booqday madaxweynayaal sida Obama, Boqorka Saudi Arabia, Madaxweynaha Turkey iyo madax kale. Isaguna waxa uu socdaallo gaa-gaaban iyo kuwo dhaa-dheerba ku gaalaa bixiyey dalal ka badan oo kor u dhaafay 20 dal, xataa waxa uu booqday dalka Greenland oo uu la soo sexeexday heshiisyo ganacsi.
Mudane Guelleh waa madaxweynihii ugu horreeyey ee ay shacabka Djabouti doortaan. Illaa immigana waxa uu ku guuleystey saddex doorasho-madaxweyne oo dalkiisa ka dhacday sannaddadii 2005, 2011 iyo 2016kii. Doorashooyinkaa oo ku qabsoomay si nabad ah. Muddooyinkaa saddexda goor ah ee uu ku guuleystay doorashooyinka madaxweyne iyo shantii sano ee ka horreyseyba waxa uu soo dhisay dawlad tayo leh, oo wasiirrada uu soo xushaa ay aqoon sare leeyihiin. Weliba wasiirrada intooda badani ay ku hadlaan luqado saddex ah amma afar ah. Qaabka ay u shaqeeyaanna uu yahay mid heerkoodu sarreeyo.
Aqoon ahaan Ismail waa nin si fiican wax u soo bartay, luqada badanna si fiican ugu hadla, sida Somaliga, Arabic, Amhariga, French, Engish iyo Canfariga. Khibrad ahaanna intii aanu madaxweynaha noqon waxa uu ahaa chief of the cabinet , waxa kale oo uu madax ka soo noqday secret police.
Wakhtigan la marayo waxa uu ku jiraa madaxda fara ku tiriska ah ee ka tala bixiya dawlad wanaagga amma afka qalaad lagu yidhaa good governors. Sidoo kale waxa uu ku jiraa madaxda Afrika ugu mudan uguna waaya aragsan, ee weliba aadka loo dhegeysto.
Senior editor of Awdalpress
Ahmedweli Sh. Omer Goth